Iphuzu elibaluleke kakhulu esikhathini ekukhuleni kwengane enyakeni owodwa Yisikhathi lapho ingane iqala ukuba ahlale yedwa. Ezinyangeni eziningi kanjani ingane iqala ahlale - udaba nezokusigcoba hhayi kuphela omama kanye obaba, kodwa futhi lodokotela. Ngokungafani abazali bazo, nilindele ngokulangazela, lapho ingane iqala ukuba ahlale, odokotela musa batusa ukusheshisa okwamanje. Konke iza isikhathi.
Zingaki izinyanga nezwe, izingane ziqala ukuba ahlale?
Izingane zizalwa umgogodla iqonde kahle. Curves bokuphila zidlule inkathi kwetinhlavu inqubo uma ethuthukisa uhlelo kwemisipha emuva, kanye ekuqaleni ukuthola umntwana esimweni mpo, okungukuthi lapho eqala ukuba ahlale, ukuhamba futhi ume. Uma ukucabanga ukuthi Ekuhlaleni kuzalwa, emgogodleni libukeka i arc okungukuthi lwalugobile kusukela phambili kuya emuva. Nezinyane lembuzi ukukhula uqala ngokuzethemba ukugcina ikhanda lakho kanye nemisipha, okuyinto zitholakala eduze komgogodla, ngokuqina bese ugcine yomgogodla sikhundla lengiyo. Kancane kancane arc atholwe flexion wesibeletho thoracolumbar. Njengoba ingane iqala ukuhlala phansi, kancane kancane kwakheka yomgogodla semfene bokuphila.
Ezinyangeni eziningi kanjani ingane iqala ahlale: owokuqala ehlezi phansi
Uma izinyane ihlala phansi ekuseni kakhulu, kungaholela a kuka eqinile yomgogodla we arc, nabo bangaba Curves okungajwayelekile. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yokuthi ingane ayikwazi ubambe ikhanda futhi uhlale uqonde, njengoba imisipha emuva nentamo azikakabi kwakhiwa, kungase kubangele displacement amathambo isihlobo komunye nomunye. Lokhu uhlobo aluphumeleli ngaphandle kokushiya nokuncane esikhathini esizayo ngempela ukuhumusha ibe ukugobeka komhlandla sokukhubazeka komgogodla.
Ezinyangeni eziningi kanjani ingane iqala ahlale: abafana
Boys usungaqala hlala phansi okokuqala e izinyanga ezine noma emine nengxenye. Kodwa lesi sitshalo ngokuphelele, isibonelo, kule highchair noma emadolweni kuza ngemuva kwezinyanga eziyisithupha. Corset imisipha uzobe kwakhiwa ngalesi sikhathi futhi ingane ngaphandle ilimaza impilo yabo, uzokwazi ukuhlala ngokwahlukana. Eyokuqala ehlezi phansi kufanele uqale kusukela emizuzwini embalwa futhi ngosuku futhi kancane kancane isimo esikhathini ingane, uhlezi. I engela ukuthambekela ngemuva nalo wanezela kancane kancane. Ngakho ukuthi bangaki izinyanga umntwana kufanele ahlale? Impendulo ilula - ngesigamu ngonyaka abafana Ungasavele Uhlalelani wedwa hhayi bawe phezu flank. Kuthathwa isikhathi esingcono uma Tshala abafana.
Ezinyangeni eziningi kanjani ingane iqala ahlale: amantombazane
Girls bahlala phansi, ungaqala eneminyaka engu efanayo umfana. Ngokuphelele isitshalo nezinyanga eziyisithupha is hhayi Kunconywa ngaphambili. Kodwa yize wazi isikhathi sokutshala amantombazane, musa ukusheshe. Ukuze uqale ukuba zihlale phansi kuphela ngemva kokuba kudlule luhlolo ngumuntu wezingane kanye wezifo zamathambo. Uma umntwana okhula ngokuhambisana ubudala, futhi alinaso pathologies ohlelweni zemisipha, ungaqala kancane ihlala phansi.
Lokuzalwa Wezingane ubunjalo noma Ukuvakashela inganekwane
NCD ohlobo abanomfutho wegazi ophakeme
Bryansk: mbukwane. Umlando kwedolobha Bryansk. Monuments of emzini Bryansk